Kaan Rabbi isinirraa fuudheera! Kaan immoo hidhaa Qaallitti seeneera! Maal jettii namittiin karkarroon kun? – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosKaan Rabbi isinirraa fuudheera! Kaan immoo hidhaa Qaallitti seeneera! Maal jettii namittiin karkarroon kun?
Kan Hacaaluu ajjeese sirna Abiy ta’uu jala murree himne. Ragaan ammoo Lamrot Kamal tu ajjeese ykn ajjeesifte jennee iyyine. Lakki isinuma Oromootu Hacaaluu ajjeese jedhanii miidiyaalee qaban hundaan gurra nu duuchan. Lamrot Kamal illee ummata jalaa dhoksan. Haqni garuu hin dhokatu. Dubbiin naannoftee Lamrot Kamal tahuu beekkame. Gara itti jalaa bahan dhaban. Diraamaan Adaanech aktara taatee hojjatte “Xilayee Xilahun Waamii Yaamii” harkatti fashale. Bakka dhugaan jirtu ummatni hubate.
Carraan isaaniif hafe Lamrot dabarsanii kennuudhaan ofiif ammoo akka Lamrot waliin walitti hidhata hin qabne fakkeessuudha. Lamrot ammoo Shanee waliin walitti hidhuudha. Garuu Lamrot Kamal akka Hacaaluu ajjeefte ykn ajjeesifte amananii jiru. Kanaaf himannaa irratti banan. Kana jechuun sirni Abiy akka ofiif Hacaaluu ajjeese ifatti amane jechuudha. Ragaan Lamrot miseensa Dehninnatiiti. Yohaannis Mitikkuu fi Dammallaash G/Mikaa’el jalatti hojjatti. Haqni afaan qaban funyaaniin dubbatti!
Kan garaa nama gubu garuu Lamrot Kamal gara jabinni isii daangaa hin qabu. Hacaaluu akkuma hiriyaatti itti dhihaattee nyaatte. Akka himatni irratti baname ibsutti nama isa ajjeesu karaatti qopheessitee Hacaaluu garas deemna jetteen. Yeroo bakka nama qopheeffatte san geessu “na dhukkubaa karaarraa gorii makiinaa naa dhaabi” jetteenii akka ajjeechaaf isaanii tolutti haala mijeessitee goota nurraa galaafatte.
Dhiigni Hacaaluu bilisummaa Oromootiin deebi’a!